Seth Godin ezighi ezi banyere onu ogugu | Martech Zone
Satọdee, Nọvemba 16, 2013 Sunday, November 17, 2013 Douglas Karr
Ka m na-agụ blọgụ na saịtị, ahụrụ m okwu sitere na Seth Godin. Enweghị njikọ na post ahụ, n'ihi ya, m ga-enyocha ya n'onwe m. Setịpụ nke ọma, Seth kwuru ya:
Ajụjụ anyị na-ajụ na-agbanwe ihe anyị na-eme. Tù ndị na-eme ihe ọ bụla ma tụọ ọnụọgụ ọnụọgụ anaghị ewepụta ihe. Naanị ọnụ ọgụgụ ka mma.
Enwere m nnukwu nkwanye ùgwù maka Seth ma nwee ọtụtụ akwụkwọ ya. Oge ọ bụla edere m ya, ọ na-eweghachi nzaghachi ngwa ngwa maka arịrịọ m. Ọ bụkwa onye na-ekwupụta okwu ihu ọha na-enweghị atụ ma na-egosipụta nkà ya na eserese. Mana, n'uche nke m, ọnụego a bụ okwu nzuzu.
Agencylọ ọrụ anyị na-elekwasị anya na nọmba… kwa ụbọchị. Ka m na-ede ihe a, m na-agba ọsọ na ngwa atọ mbanye saịtị ndị ahịa maka nsogbu, abanyela m na Webmasters na Google Analytics. Taa m ga-enyocha nyocha saịtị maka ọtụtụ ndị ahịa. Ọnụ ọgụgụ… ibu nke nọmba.
Onu ogugu n'onwe ha ekwughi nzaghachi, obu. Ọnụ ọgụgụ chọrọ ahụmahụ, nyocha na ihe okike iji rute atụmatụ ziri ezi. Enweghị onye ahịa ọ bụla ga-ahọrọ n'etiti ọnụọgụ na imepụta ihe. N'ezie, ọnụọgụ ndị ahịa anyị na-achọkarị nnukwu okike na ihe egwu na-akpali ha ịkwaga n'ụzọ ziri ezi.
Otu n'ime ndị ahịa anyị nke nọnyeere anyị ruo ọtụtụ afọ abaala ogo nyocha ha na okporo ụzọ ha na-eto eto - mana ntụgharị ha dị larịị. Ebe ọ bụ na ibu ọrụ anyị na-elekwasị anya na nloghachi na ntinye ego, anyị ga-eme ihe okike. Anyị merụrụ ụlọ ọrụ ahụ aha ọzọ, mepụta weebụsaịtị ọhụụ, belata ibe a na-agụ obere akụkụ nke saịtị gara aga, yana imepụta saịtị nke dị n'etiti ụlọ ọrụ ahụ na enweghị foto foto, foto niile na vidiyo nke ndị ọrụ ha na akụrụngwa.
Ọ bụ nnukwu ihe egwu nyere ọtụtụ ndị na-eduga na-abata na saịtị ha. Mana ọnụọgụ ahụ nyere ihe akaebe na anyị ga-eme ihe dị egwu (ma dị egwu) ma ọ bụrụ na ha chọrọ inwekwu ahịa ahịa. Naanị ịlele nọmba bụ ihe dugara anyị na mgbanwe dị egwu… ọ rụkwara ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ toro ma na-achọ ugbu a ịgbasa site na ọnọdụ 2 gaa na ọnọdụ 3 - n'otu oge ahụ ha belatara ndị ọrụ ha na-apụ apụ.
M soro ọtụtụ puku ndị mmepe, ndị ọnụ ọgụgụ, ndị mgbakọ na mwepụ na ndị nyocha na ndụ m niile kwenye, ekwetaghị m na ọ bụ ihe ndabara na ọtụtụ ndị kachasị mma mụ na ha rụkọtara ọrụ nwere ọpụpụ okike.
Nwa m, dịka ọmụmaatụ, na-arụ ọrụ na PhD na mgbakọ na mwepụ, mana ọ nwere mmasị maka egwu - egwu, ide, ịgwakọta, ndekọ na DJ'ing. Ọ (n'ụzọ nkịtị) na-akpọpụ nkịta ahụ ma anyị ga-ahụ nha esemokwu edere na windo ebe ọ na-eguzo ka ọ na-emikpu onwe ya n'ọrụ ya. Ruo taa, ọ na-ejegharị na ihe akara-ihichapu akara na akpa ya.
Ọ bụ agụụ ya maka ọnụọgụ na egwu na-eme ka okike ya na ma. Ihe okike na itinye ihe ize ndụ aburula n'obi nyocha a o mere (a na-enyocha ya ma bipụta ya). Ihe okike ya na-enye ya ohere ilele ọnụọgụ ahụ na-enweghị ọhụụ ọwara ma tinye usoro dị iche iche na usoro maka nsogbu ọ na-anwa idozi. Na nsonaazụ ya abụghị mgbe niile nọmba ka mma… Mgbe ụfọdụ ọnwa ọrụ na-atụfu na ya na ndị otu ya bidoro.
Arụrụ m ọrụ ọtụtụ afọ na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ ebe ha lekwasịrị anya na ọnụọgụ na ọdịbendị na-asọ oyi na-aga n'ihu na-eme ka ha laa n'iyi. Ma m na-arụ ọrụ maka startups onye hụrụ na ha enweghị ike budge nọmba na kpamkpam reinvented ha ụlọ ọrụ, mbọn, ngwaahịa na ọrụ mgbe “nọmba” ndị siri ike ka mma.
Mmepụta ihe na mgbagha anaghị emegide ya, ha na-aja ibe ha mma. Ọnụọgụ nwere ike ịchụpụ ụlọ ọrụ ka ha were nnukwu ihe egwu, mana ọ dabere na ọnụọgụ - ọ dabere na ọdịbendị nke ụlọ ọrụ ahụ.
Tags: nọmbaseth godin
Nov 18, 2013 na 9:14 AM
Echere m na ị tufuru isi okwu Seth: isi okwu bụ "naanị." Ọ bụrụ n ’nọmba sọọsọ ka ị na-eme ma ọ nweghị ihe ị mere, n’ezie ị na-egbu oge gị. I mekwara nke ahụ. Na-ele nọmba ahụ anya, nyochaa ha, ma hapụ ka nyocha ahụ kọwaa mkpebi gị. Ana m arịọ ndị na-ahụ maka ngwaahịa ka ha leba anya na ọnụọgụ iji nụchaa ngwaahịa ha na atụmatụ ha. Lee http://appliedframeworks.com/planning
Nov 18, 2013 na 9:24 AM
M gụrụ isiokwu ahụ nke ọma, Steve, na ewereghị ya n'ụzọ ahụ. O kwuru na ndị mmadụ na-elele ọnụọgụgụ naanị na-ebute ọnụọgụ ka elu - nke pụtara na ọ na-atụ anya ka ha mee ihe. Ihe m na-ekwu bụ na ọ bụghị naanị 'ọnụ ọgụgụ dị elu' ka mmadụ nwere ike nweta mgbe 'naanị ilele nọmba'. Ọnụọgụ ndị ahụ nwere ike iduga ngbanwe karịa. Ọ bụghị maka ọnụọgụgụ, ọ bụ gbasara ọdịbendị.
Nov 18, 2013 na 9:26 AM
Jụụ. Ahurum isi okwu gi. Ee ee, omenaala bụ isi. Daalụ maka nkọwa.